garima bikas bank limited(garima bikas bank limited) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
गरिमा विकास बैंकका ग्राहकलाई आगन्तुक रिसोर्टमा २३% सम्मको छुट
काठमाण्डौ । गरिमा विकास बैंकका ग्राहकले पर्यटकीय गन्तव्य बनेपास्थित ‘आगन्तुक रिर्सोट’ २३ प्रतिशतसम्म छुट पाउने भएका छन्। गरिमा विकास बैंकले आगन्तुक रिसोर्टसँग आफ्ना ग्राहकलाई विभिन्न सेवासुविधामा आकर्षक छुटसम्बन्धी सम्झौता गरेको हो। जसअनुसार गरिमा विकास बैंकका डेबिट कार्ड तथा मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताले रिसोर्टको रुममा...
गरिमा विकास बैंकका ग्राहकलाई ल्यान्डमार्क होटेल्स रिर्सोटमा ३५% सम्मको छुट
काठमाण्डौ । गरिमा विकास बैंकका ग्राहकले नेपालको एक प्रख्यात चेन होटेल ल्यान्डमार्क होटेल्स रिर्सोट एन्ड स्पामा आकर्षक छुट पाउने भएका छन्। आन्तरिक पर्यटनलाई प्रोत्साहन तथा प्रवर्द्धन गर्नुका साथै आफ्ना ग्राहकलाई थप सुविधाहरु प्रदान गर्नका लागि गरिमा विकास बैंकले ल्यान्डमार्क होटेल्स रिर्सोटसँग छुट सम्झौता गरेको हो। सम्झौताअनुसार...
गरिमा विकास बैंकको ‘गरिमा तीजको लहर’ टिकटक प्रतियोगिता सुरु, कसरी सहभागी बन्ने ?
काठमाण्डौ। नेपाली नारीहरुको महान चाड हरितालिका तीज नजिकिँदै गइरहेको छ। तर, विश्वमा फैलिरहेको महामारी कोरोनाभाइरसले गर्दा गत वर्षमा जस्तै भौतिक दूरी कायम राखी तीज मनाउने अवस्था हाललाई सम्भव नभएकाले भौतिक उपस्थिति बिना प्रविधिमैत्री तीजलाई प्रोत्साहन गर्न गरिमा विकास बैंकले सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनीहरुका लागि ‘गरिमा तीजको लहर’...
सहारालाई प्राप्ति गर्न गरिमा विकास बैंकले भदौ १५ मा डाक्यो विशेष साधारणसभा
काठमाण्डौ । सहारा विकास बैंकसँगको प्राप्ति प्रक्रियालाई अनुमोदन गर्न गरिमा विकास बैंकले विशेष साधारणसभा डाकेको छ। बैंक सञ्चालक समितिको हिजो बसेको बैठकले विशेष साधारणसभा आउँदो भदौ १५ गते आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। सभा काठमाण्डौको लाजिम्पाटस्थित बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा बिहान १० बजेबाट सुरु हुनेछ। सभाले सञ्चालक समितिबाट...
गरिमा विकास बैंकको नाफा रु. ८२.५२ करोड, रिजर्भमा ४६.०३%को बढोत्तरी
काठमाण्डौ । गरिमा विकास बैंकले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्म ८२ करोड ५२ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ। आज सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिसम्म बैंकको नाफा अघिल्लो वर्षको यही अवधिसम्म तुलनामा ४२.९७ प्रतिशतले बढी हो। अघिल्लो वर्ष बैंकले ५७ करोड ७२ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो। यो अवधिसम्म बैंकको...
काठमाण्डौ । गरिमा विकास बैंक लिमिटेडले केसीएल अस्ट्युट क्यापिलट लिमिटेडको सेयर स्वामित्व खरिद गर्ने भएको छ। यससम्बन्धी सम्झौतामा गरिमा विकास बैंक र केसीएल अस्ट्युटबीच शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा हस्ताक्षर भएको छ। सम्झौतापत्रमा गरिमा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दप्रसाद ढकाल र केसीएल अस्ट्युटका अध्यक्ष दिपक...
बिजनेस ग्रोथमा आक्रामक गरिमा विकास बैंकको नाफा ३६.६३%ले बढ्यो, ईपीएस कति ?
काठमाण्डौ । कोरोना कहरबीच व्यापार विस्तारमा आक्रामक देखिएको गरिमा विकास बैंकको नाफा चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म ३६.६३ प्रतिशतले बढेको छ। आज सार्वजनिक तेस्रो त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिसम्म बैंकले ६७ करोड ८२ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। गत वर्ष यही अवधिसम्म बैंकको खुद नाफा ४९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ...
आगामी दिनमा गरिमा विकास बैंकको सेयरभाउ के होला ? यस्तो छ आधारभूत र प्राविधिक पक्ष
– अर्जुन तिमिल्सिना काठमाण्डौ । ग्रामीण बस्तीलाई आधार बनाएर स्याङ्जाको वालिङमा प्रधान कार्यालय राखेर गरिमा विकास बैंक २ करोड ६५ लाख पुँजीका साथ २०६४ सालमा स्थापना भएको थियो। स्थापनाकालमा स्याङ्जा, कास्की र पाल्पा गरी ३ जिल्ला कार्य क्षेत्र बनाएको यो बैंक हाल राष्ट्रियस्तरको बनेको छ। हाल काठमाण्डौ लाजिम्पाटमा केन्द्रीय कार्यालय...
गरिमा विकास बैंकको नयाँ वर्षको क्यालेन्डर सार्वजनिक
काठमाण्डौ । गरिमा विकास बैंक लिमिटेडले नयाँ वर्ष २०७८ सालको आफ्नो आधिकारिक क्यालेन्डर सार्वजनिक गरेको छ। बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दप्रसाद ढकालले बैंकको प्रधान कार्यालय लाजिम्पाटमा एक कार्यक्रममाझ आफ्नो आधिकारिक क्यालेन्डर सार्वजनिक गरेका हुन्। बैंकले हाल ३५ जिल्लामा १०६ शाखा कार्यालय एवं ५१ एटीएमबाट सरल, सुरक्षित...
गरिमा विकास बैंकले सुरु गर्यो ‘रहनुहोस् होसियार !’ अभियान
काठमाण्डौ । राष्ट्रियस्तरको गरिमा विकास बैंकले समग्र बैंकिङ प्रणालीमा बढ्दो इन्टरनेट फ्रड/फिसिङबारे जनमानसमा चेतनामूलक सन्देश प्रवाह गर्ने लक्ष्यका साथ आफ्नो सबै सामाजिक सञ्जालबाट एक महिना लामो ‘रहनुहोस् होसियार !’ नामक अभियान चलाइरहेको छ। यस अभियानअन्तर्गत हरेक दिन बैंकले इन्टरनेट फ्रड/फिसिङसँग सम्बन्धित विभिन्न...
गरिमा विकास बैंकबाट ८.७५% ब्याजदरमै गाडी कर्जा पाइने
काठमाण्डौ । गरिमा विकास बैंक लिमिटेडले आफ्नो कर्जा प्रवाह रणनीतिलाई थप आक्रामक बनाउँदै न्यूनतम वार्षिक ८.७५% ब्याजदरमा ‘गरिमा सजिलो अटो लोन’ सार्वजनिक गरेको छ। यो सुविधाअन्तर्गत बैंकले खरिद मूल्यको *८०% सम्म अधिकतम १० वर्षका लागि कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछ। आफ्नो सवारी चढ्ने सपना पूरा गर्न ‘गरिमा सजिलो अटो लोन’ एकदमै...
गरिमा विकास बैंकका नवनियुक्त अध्यक्ष बस्यालद्वारा शपथ ग्रहण
काठमाण्डौ । गरिमा विकास बैंकका नवनियुक्त अध्यक्ष श्यामप्रसाद बस्यालले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्। अध्यक्ष बस्यालले नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर चिन्तामणि शिवाकोटीबाट शपथ लिएका हुन्। उनले आजैबाट पदभार ग्राहण गरेका छन्। बैंकको गत माघ ३० गते सम्पन्न १४ औँ वार्षिक साधारणसभाबाट संस्थापक शेयरधनी समूहका तर्फबाट...
गरिमा बैंकको साधारणसभाबाट १४.२१% लाभांश पारित, श्याम बस्याल बने अध्यक्ष
काठमाण्डौ । गरिमा विकास बैंक लिमिटेडको मिति २०७७ माघ ३० गते शुक्रबार सम्पन्न साधारणसभाले शेयरधनीहरुलाई १३.५ प्रतिशत बोनश शेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.७१ प्रतिशत नगद लाभांश गरि कुल १४.२१ प्रतिशत लाभाशं वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । होटल पोखरा ग्राण्ड, पोखरामा सम्पन्न १४ औं बार्षिक साधारणसभाबाट संस्थापक शेयरधनी समूहतर्फ...
काठमाण्डौ । गरिमा विकास बैंक लिमिटेडले आफ्ना ग्राहकलाई दिइरहेको बैंकिङ सेवासुविधालाई थप प्रभावकारी बनाउने प्र्रायोजनका लागि कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–१ वगरस्थित आफ्नो शाखा कार्यालयबाट लकर सुविधा सुरु गरेको छ। बैंकद्वारा आयोजित एक कार्यक्रमबीच उक्त सुविधाको औपचारिक उद्घाटन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दप्रसाद...
गरिमा बैंकको ‘मेरो शेयर बचत खाता’ योजना : आकर्षक ब्यादरसहित निःशुल्क डिम्याट अनि सि–आस्बा सुविधा
काठमाण्डौ । गरिमा विकास बैंक लिमिटेडले शेयर मार्केटलाई साधारण जनताको पहुँचसम्म पुर्याउन ‘मेरो शेयर बचत खाता’ सार्वजानिक गरेको छ। यो खाताअन्तर्गत ग्राहकले न्यूनतम रु ५०० मा खाता खोली निःशुल्क डिम्याट खाता र निःशुल्क सि–आस्बा सुविधा लिन सकिनेछ। पहिला नै डिम्याट खाता हुने ग्राहकले पनि यो खाता खोलि निःशुल्क सि–आस्बाको सुविधा...